Drive The adag yahay dukaanka computer ah ee xogta. Laga soo bilaabo nidaamka qalliinka in ay music iyo sawirada, drive adag ku jira dhammaan xogta ku saabsan nidaamka. Sidaa darteed, in ay leeyihiin drive adag tagaan haywire ka dhigan tahay suurtogalnimada uu badiyay tan oo xog qiimo leh. Khasaaraha Tani waxay noqon kartaa ka sii halis ah haddii user uusan haysan gurmad ah oo xog ah ee drive ee adag. Maqaalkani waxa ujeedadiisu ku faafiyo wacyi qaar ka mid ah oo la xiriira qalabka Mac kabashada drive adag maadaama ay jiraan badan oo ka mid ah ee nidaamka Windows ku salaysan laakiin aad u yar shaqada in la Mac OS X.
Waa kuwee arrimaha keeni karto khasaaro xog ku saabsan drive adag ee Mac?
Waxay keeni kartaa sababo kala duwan Loss Xogta drive adag ee Mac ah. Mararka qaarkood, waxaa baqdin iyo Dicumintiyo software sida shil lama filaan ah ee nidaamka qalliinka ama ka dib update ah a. Mararka qaarkood, id ku gaartay xogta ay sabab u tahay fashilka hardware ah, sida failure ee drive adag laftiisa. Sababaha kale waxaa ka mid ah khaladaadka aadanaha sida la tirtiro xogta si shil ama formatting drive adag ula kac ahayn.
Qalabka Top 5 Mac kabashada xogta
Wondershare Data Recovery for Mac Waa qalab loogu talagalay wax kaqabashada xogta laga badiyay. Qalabkani waxa uu si gaar ah waxtar leh sida ay leedahay taageero dheer in ka badan 550 nooc file taas oo aan suurta galayn, waayo, taasu inuu seego file ah. Wondershare Data Recovery for Mac Qaadataa daryeelka ee files tirtiray si qalad ah ama ay sabab u tahay formatting iyo sidoo kale kuwii laga waayay virus ama cillad kale oo ka mid ah nidaamka qalliinka. Software waxay bixisaa afar hababka soo kabashada in ay yihiin: Wizard Mode Recovery, Recovery File Lost, Recovery ah Barzakh, iyo ceeriin Recovery kasta isagoo ay awoodi la yaab leh u gaar ah.
Faa'iido: Wuxuu bixiyaa aasaasiga ah oo dhan iyo sidoo kale functionalities heer sare ah oo ku xirmo hal
Qasaarooyinka: heli karaan wax yar u badneyd
EaseUS Data Recovery Wizard u Mac
EaseUS Data Recovery Wizard u Mac waa utility ah oggolaanaysa in dadka isticmaala soo kabsado xogta ka Macs ay eegin sababta sababaya maqal la'aan ah. Software soo kaban karto, xogta ayaa la waayin, in takhalusid shil ah, formatting, nidaamka qalliinka cillad, nidaamka qalliinka shil iyo tayeynta iyo sidoo kale cudurada virus. Xogta waxaa lagu heli karaa laba qaabab kala duwan iyo natiijada waxaa loo kala saaraa iyadoo ay ku saleysan waddada, wakhtiga tirtirka iyo nooca. Natiijooyinku waxay la previewed karo ka hor inta aan si dhab ah si kabsaday, waxaad si fudud u hayn karaa oo kaliya xogta aad u baahan tahay.
Faa'iido: Easy in ay isticmaasho bilowga ah
Qasaarooyinka: goynta muuqataa caddaalad darro sida waxyaabaha la midka ah lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah
Iyada oo farabadan ee muuqaalada cajiib buuxiyey oo ku yaal software hal, Prosoft Data Rescue 4 weliba waa badbaadadayda oo dhan, kuwa dadka isticmaala Mac in ay leeyihiin drives adag khaldan. Rescue Data 4 ma aha oo kaliya qaadataa daryeelka dhibaatooyinka software, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa users abuuri Gadzhiyev oo ka mid ah dhammaan macluumaadka ee drive adag haddii dhaawaca yahay mid soo dhamaystiraya halkan ka yaraynaysa fursadda ay ku soo gaartay data. Intaas waxaa sii dheer, feature BootWell ogol yahay dadka isticmaala si ay u abuuraan bilow ilaa drives sare inuu ka soo kabsado files ka bilowdo drive ugu weyn ee ku adag tahay. The feature FileIQ waa mid ka mid ah nooc ka mid ah oggolaanaysa in software barto noocyada file cusub dynamically.
Faa'iido: FileIQ awood isticmaalka Rescue Data 4 ee deegaan-dhamaadka sare sida guryaha software
Qasaarooyinka: qaali marka loo eego software kale oo la mid
DiskWarrior 5 waa utility ah soo kabashada xogta cajiib ah oo aan kaliya kabanayso xogta ka drive ah ku guuldareysteen laakiin sidoo kale hayaa aad ka baareyso drive si aad u hubiso haddii ay qarka u saaran hartay. Waxaa intaa dheer, waxay hawada ku DiskWarrior 5 qaadataa daryeelka farriimaha khalad siiyey nidaamka qalliinka in user caadiga ah ma decrypt karo. Muuqaalada dheeraad ah waxaa ka mid ah awood u leh inay Gadzhiyev oo dhan xogta ka drive ay ku guuldareysteen inay baabuur functional adag oo baaritaano ah drive waxaa cusboonaysiiyey si loo hubiyo in wax walba waa si. Iyada oo taageero farsamo oo lacag la'aan ah. Alsoft bixisaa waafaqsan markii ay OS X 10.5.8 u Warrior Disk 5.
Faa'iido: kala duwan ee Greater taageeray versions OS X
Qasaarooyinka: Aad u qaali ah
UndeleteMyFiles Pro waa mid fudud oo ah in la isticmaalo, software kabashada xogta aasaasiga ah iyada oo aan la nolosah show. Waxa ay waxa wax software kabashada file samayn doonaa, laakiin fududeyneysa habsocodka. Waxay leedahay Wizard Rescue File ah taasoo u fududaynaysa in la helo oo soo kabsado files tirtiray. Functionalities kale waxaa ka mid Media bogsii, masaxay File Search, Mail Samata-bixinta iyo Wiper Files ah in tirtiro oo ka mid ah dhammaan faylasha loo baahnayn si joogto ah. Faa'iidada ugu weyn in UndeleteMyFilesPro leeyahay in ay bixiyaan in ka badan Softwares kale oo la mid ah waa in ay gabi ahaanba waa bilaash ah si ay u isticmaalaan iyada oo aan xayiraado xadka xogta.
Faa'iido: siisaa dhammaan functionalities in Softwares kale la mid ah ayaa laga yaabaa in lacag dalbanaynaa, for free
Khasaaraha: Waxay bixiyaan functionalities aasaasiga ah, qaababka heer sare ah sida cloning ma laga heli karaa
Download iyo rakibi Wondershare software Data Recovery aad laptop ama computer. Burcad Wondershare Data Recovery mar rakibo waa dhameystiran yahay. Dooro Qaabka Recovery sida ay baahidaada.
Wondershare Data Recovery Hadda ku weydiin doonaa inaad u meesha xogta laga yaabaa in ay ka hor inta aanad la tirtiro / lumay. Dooro ku haboon ka mid ah liiska kuwa loogu talo galay ama si fudud u dooro "Ma xasuusan karo" haddii aadan hubin goobta. Guji "Next" in la sii wado. Waxaad kaloo dooran kartaa "awood scan qoto dheer" doorasho si ha barnaamijka waddaa sii wadid aad u adag in ay dib u soo ceshano xitaa xogta qeydhin, waxay qaadan doontaa waqti dheer si ay u dhameystiraan baaritaan ka badan in hab caadi ah.
Guji "Scan" in ay oggolaadaan in software ah laga bilaabi karo habka file waxkaqabasho. Marka software sameeyo ay shaqo, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan faylasha baxey. Markaas Waxaad dooran kartaa kuwa aad rabto in aad soo celin by iyaga xulashada iyo gujinaya ikhtiyaarka "Soo Celinta".
> Resource > Mac > Top 5 Mac Hard Drive Recovery qalab loogu talagalay soo celinta xog ku saabsan Mac OS X